I-Ultrasonic Mini Flow Cell - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ngokuvamile i-ultrasound ejulile idluliselwa emigqumeni encane nge-titanium sonotrode engena eketsheni. Le ndlela iphumelela kakhulu kodwa inomphumela ohlangothini wokuthi kukhona i-cavitation ku-sonotrode, okuholela ekungcoleni okuncane nge-titanium izinhlayiya ezinhle ngaphakathi. Izithasiselo ezinjalo kufanele zigweme uma kudingwa izinga eliphezulu lokuhlanzeka njengokwesibonelo embonini yezokwelapha.
Iseli Egeleza Ekhethekile
Ukuze uxazulule le nkinga i-Hielscher Ultrasonics ithuthukise ekusebenzisaneni ne-ETH Zürich iseli eligelezayo elikhethekile, elikhuluma nge-medium ngokungaqondile kodwa noma kunjalo ukuphakama okukhulu kakhulu. Esikhathini esivaliwe uhlelo oluphakathi luholwa ukungcola-mahhala ngokusebenzisa ithuluzi lesilazi, engathintana ne-sonotrode noma nomkhathi. I-liquid esungeze ipayipi yeglasi ingene lokushisa kwenqubo efanele. Le ndlela iqinisekisa ukukhiqiza okuphezulu.
Ngokuhambisana neprojekthi ekhethekile eyenzelwe i-processor ultrasonic UIS250Dmini leli cell cell lokugeleza lingasetshenziswa ikakhulukazi I-homogenizing, Emulsifying, Ukuhlakazeka, Ukuqhafaza noma i- ukuhlakazeka kwamangqamuzana ephilayo noma ama-micro organisms. I-flow cell isetshenziselwa izinhlelo zokusebenza kuma laboratories kanye nemikhiqizo yamanani amancane kanti impela isimiso esifanayo singabuye saqaphela ngezinga elikhulu.
Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela imininingwane eyengeziwe maqondana naleli seli eligelezayo.